Monster’s Ball (2001) – Burmese Subtitle 01 Mar 2002
R 2001 111 min Drama, Romance
Amber Rules, Billy Bob Thornton, Coronji Calhoun, Gabrielle Witcher, Halle Berry, Heath Ledger, Peter Boyle, Sean Combs, Taylor Simpson, Yasiin Bey
Won 1 Oscar. Another 14 wins & 22 nominations.
Monster’s Ball (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDB — 7.1/10
Google Users — 77%
ကြွေလွင့်သွားပြီးတဲ့ Hollywood က ကြယ်ပွင့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကိုလူ့ဘဝကိုပြန်ခေါ်လို့ရမယ်ဆို ကျွန်မကတော့ Heath Ledger ကိုပြန်ခေါ်ပါရစေလို့ပဲပြောမိပါလိမ့်မယ်။
သူ့နာမည်အရင်းက Heath Andrew Ledger ပါ။
Heath Ledger ကို4April , 1979 မှာ
Perth, Australia မှာမွေးပါတယ်။
သူရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ 10 Things I Hate About You (1999), The Patriot (2000), A Knight’s Tale (2001), Monster’s Ball (2001), Lords of Dogtown (2005), Brokeback Mountain (2005) နဲ့ The Dark Knight (2008) တို့ကိုကြည့်ဖြစ်တိုင်းအမြဲနှမြောလို့မဆုံးတာပါ။
အဲ့ဒီအထဲကမှ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ အော်စကာဆုကို မင်းသမီးသရုပ်ဆောင် Halle Berry မှရရှိသွားခဲ့တဲ့ Monster’s Ball (2001) ကိုပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ဒါ့အပြင်အခြားသော ဆုတွေအတွက်လည်း ရာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်….
ကြွေလွင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Heath Ledger ကိုလည်းပြန်လည်တမ်းတတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်မ ဒီကားလေးကိုကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…..
ကျွန်မရေးလိုက်ရင် အရသာပေါ့ပျက်ပျက်ကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ ပြီးတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း 18+ အခန်းလေးတွေ ပါလို့ မိသားစုနဲ့အတူတူမကြည့်ှရှုသင့်ပါဘူးရှင်
File Size – 2.80 GB
Quality – BluRay 1080p DTS 6CH
Audio – DTS(Digital Theater System)
Running Time – 1:52:42
Genre – Drama,Romance
Translator – Frankenstein
Option 1 Drive.google.com 2.80 GB 1080p
Option2Megaup.net 2.80 GB 1080p
Option3Onedrive.live.com 2.80 GB 1080p
Option4Letsupload.co 2.80 GB 1080p
Option5Pcloud.com 2.80 GB 1080p
Sui Dhaaga (2018) 2018
Platoon (1986) 1986